Sajhasabal.com |गायक तथा बामपन्थी नेता भिमलाल भुसालको हृदयघातका कारण निधन
काग्रेसको जागरण अभियान अन्तरगत खर्वाङमा भेला सम्पन्न
पदमागर्दले जोडिँदै पञ्चकोट–ढोरपाटन
बडिगाड गाउँपालिका ३ सिसाखानीमा खानेपानी निर्माण कार्यको आम भेला सम्पन्न
बागलुङमा पाँच जुवाडे पक्राउ
कमल पौडेल | कात्तिक २३, बडिगाड | बागलुङ पश्चिमका जनवादी, प्रगतिशिल गायक तथा बामपन्थी नेता भिमलाल भुसालको निधन भएको छ । पञ्चायती व्यावस्थाको विरुद्ध बागलुङ पश्चिम क्षेत्रवाट कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा जोडिएर आन्दोलनमा होमिएका भुसालको भक्तपुरको लोकन्थलीमा हृदयघातको कारण निधन भएको हो ।
बागलुङ पश्चिममै पहिलो हार्मोनियम वादकको रुपमा परिचित भुसाल कुशल उद्घोषक तथा गायक हुनुहुन्थ्यो। कुनै कृति वजारमा नभएपनी विभिन्न पत्रपत्रिकामा दर्जनौ रचना प्रकाशित छन्। पञ्चायति शासन विरुद्ध गित तथा नाटकवाट जनतालाई सुसुचित गर्ने भुसाललाई तत्कालिन पञ्चायति प्रशासनले पटक पटक वारेन्ट जारी गरेपनि पक्राउ गर्न सकेको थिएन । २०४८ सालमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टिको सदस्यता लिएका भुसाल नेकपा एमालेको गाउँकमिटि सदस्य, इलाका कमिटि सदस्य, हुँदै क्षेत्रिय कमिटि सल्लाहकार सदस्य सम्म हुनुभएको थियो ।
सांस्कृतिक फाँटमा दख्खल राख्ने भुसाल हिमालि साँस्कृतिक परिवार हुँदै राष्ट्रिय जनसाँस्कृतिक महासंघको जिल्ला कमिटि बागलुङ तथा गाउँकमिटि दगातुन्डाडाको संस्थापक हुनुहुन्थ्यो। हाल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको केन्द्रिय प्रतिनिधिको रुपमा रहनु भएका भुसाल पेशाले शिक्षक हुनुहुन्थ्यो ।
वि.सं. २०४८ वाट स्थायी प्रावि शिक्षकको रुपमा रेमली टोला प्रावि सक्न्यारमा काम गर्दै आउनुभएका भुसाल वि.सं. २०५३ मा मावि तहमा स्थायी हुनुभएको थियो । त्यसपछि हाल सम्म भिमगिठे मावि मा अध्यापन गराइरहनुभएको थियो। गएको भाद्र महिनामा चिप्लिएर लेडेपछि स्पाइन इन्जुरी भएको र डाक्टरको सल्लाह वमोजिम बेड रेष्टगरि साधारण हिडडुल गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको वेला सो घटना भएको हो । विहान हिँडडुल गर्न वाहिर निस्कनु भएका भुसाल एक्कासी पल्टिएको र अस्पताल पुर्याउँदा निधन भैसकेको पारिवारिक श्रोतले जनाएको छ । हिँजो साँझ मात्रै आफु संग कुरा भएको र महोत्सव तयारी को विषयमा लामो कुरा भएको भुसालका भतिज समेत रहनुभएको जिल्ला समन्वय समिति बागलुङका उपप्रमुख विष्णु भुसालले जानकारी दिनुभएको छ ।
भुसालको वि.सं. २०२० साल श्रावणमा साविक दगातुन्डाडा गाविसको वडा नं. ९ सक्नयारमा जन्म भएको थियो। भुसालका २ छोरा र १ छोरी छन्। जेठा छोरा किरण भुसाल बडिगाड गाउँपालिकाका इन्जिनियर हुने भने कान्छा छोरा रामु भुसाल आइटि इन्जिनियर हुन्। छोरी मञ्जरीले विवाह पछि अष्ट्रेलीयामा अध्ययन गर्दै छन्। भुसालको पशुपति आर्यघाटमा आजै हिन्दु परम्परा अनुसार दाहसंस्कार गरिएको छ।
माथिको तस्वीरमा: भिमलाल भुसाल